5ml၊ 10ml၊ 20ml၊ 25ml ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်သော အိတ်အရည်အိတ် ထုပ်ပိုးသည့်စက်
ဤစက်သည် မုန့်၊ ဆီ၊ ရေ၊ ငံပြာရည်၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များကဲ့သို့ ပုံမှန်မဟုတ်သော အိတ်အမျိုးအစားထဲသို့ အရည် သို့မဟုတ် ငါးပိကဲ့သို့သော ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုပ်ပိုးရန်အတွက် သင့်လျော်သော ပစ္စတင်ပန့် သို့မဟုတ် အပ်ပန့်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များနှင့်အညီ စက်သေမှိုကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ၊ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များ။
1. လုပ်ဆောင်ချက်အလိုအလျောက်ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်း၊ အိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကုဒ်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း။အိတ်ပြုလုပ်သည့်စနစ်သည် တိကျသောအဆင့်မော်တာကို လက်ခံပါသည်။
2. Touch မျက်နှာပြင်ပြသမှု။
3. Controller သည် တရုတ် သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ပြကွက်ကို လက်ခံသည်၊ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
4. အသိဉာဏ်ရှိသော photoelectric controller စနစ်နှင့်အတူ။
5. စက်ကိုယ်ထည်တွင် 304 stainless steel အပြည့်။
6. အရည်ဖြည့်ဆေး၊ မြင့်မားသောတိကျမှု။
7. ဘေးအဖွင့်အကာအရံပြားများဖြင့် ကောင်းစွာမြင်နိုင်သည်၊ ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်ပါ။
8. နောက်ဆုံးပေါ် hopper sets များကို လက်ခံပါ၊ ချိန်ညှိရန် လွယ်ကူပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လွယ်ကူသည်၊ သန့်ရှင်းပြီးနောက် ထပ်မံချိန်ညှိရန် မလိုအပ်ပါ၊ သို့မှသာ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
9. ဤစက်သည် granule ထုတ်ကုန်များထုပ်ပိုးရန်အတွက်သင့်လျော်သည်၊ အိတ်သည်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ 3-side သို့မဟုတ် 4-side seal သို့မဟုတ် back seal ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
10. Ribbon printer သည် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်အရ လိုင်းတစ်ကြောင်းမှ သုံးကြောင်းအထိ ရိုက်နှိပ်နိုင်သော၊ ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စွဲနှင့် အတွဲနံပါတ်တို့ကို ရိုက်နှိပ်နိုင်သည်။
အတိုင်းအတာ အရည်ထုတ်ကုန်များအတွက် ဆေးထိုးအပ် အဆို့ရှင်ပန့် (hopper 0-30ml၊ 30-100ml မပါဘဲ)
ဖြတ်တောက်ခြင်းအမျိုးအစား ဖြောင့်ရှုးတို့နဲ့V မျက်ရည်ထစ်
တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ အလျားလိုက် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း-လိုင်းဒေါင်လိုက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း-စိန်
စွမ်းရည် ၃၀ -45အိတ်/မိနစ် (ထုတ်ကုန်ပေါ်မူတည်၍)
အိတ်အရွယ်အစား အိတ်အရှည် 30-190 မီလီမီတာအိတ်အကျယ်: 10-100mm
လေစားသုံးမှု 0.35 မီတာ3/ မိနစ်
ဗို့အား 220Vသို့မဟုတ် 380v သို့မဟုတ် လျော်ညီစွာ ပြုလုပ်ထားသည်။
စက်အရွယ်အစား L×W×H- (၉၀၀x၇၃၀x၂၂၀၀)၊mm
ပစ္စည်း ထိတွေ့အစိတ်အပိုင်းများ- စတီးလ် 304
ရက်စွဲ ကုဒ်နံပါတ် ဖဲကြိုး ပရင်တာ
Needle valve Pump တစ်လုံး
ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ဦးဆောင်ချိန်
2) Drive အစိတ်အပိုင်းများကို ချောဆီပေးပါ။
3) ပြင်ပါ။စက်screws များနှင့်။
5) ထုပ်ပိုးခြင်း။စက်Plywood Cases ထဲသို့
6) အမှုတွဲများပေါ်တွင်သင်္ဘောအမှတ်အသား. အားဖြင့်ပင်လယ်၊ လေကြောင်း သို့မဟုတ်ထရပ်ကား
7) ဦးဆောင်အချိန်: 15-20 အလုပ်လုပ်ရက်။
ယခင်- ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်/ငရုပ်ဆီအရည် ထုပ်ပိုးထားသော စက်
နောက်တစ်ခု: 100-500ml ဂျယ်/ငံပြာရည်/ရေ/အရည်ချောင်း ထုပ်ပိုးအိတ် အိတ်ထုပ်ပိုးစက် စျေးနှုန်း
Suar/3 in 1 ကော်ဖီ/စေ့/လက်ဖက်ရည်ကြမ်း အိတ်ခွံ...